बिलबोर्ड डिजाईन गर्दा मैले के विचार गर्नुपर्छ? - Print Peppermint
बिलबोर्ड डिजाईन गर्दा मैले के विचार गर्नुपर्छ?
नोभेम्बर 23, 2018 | ब्यानर र साइनेज
तपाईंको बिलबोर्ड डिजाइनमा विचार गर्नुपर्ने Es आवश्यक कुराहरू
विशाल दर्शकहरूको लागि सडकको बिलबोर्ड डिजाईन गर्न एउटा माथिल्लो कार्य जस्तो देखिन्छ तर थोरै दिमाग म्यापि। र रचनात्मक जादूको हल्का स्पर्शले, यो ABC जत्तिकै सजिलो हुन सक्छ।
बिलबोर्ड र अन्य बाहिरी विज्ञापनहरू जस्तो पोष्टकार्डहरू र ब्रोसरहरू बीच एउटा ठूलो भिन्नता आकार हो। यसको लागि तपाइँको डिजाईन एलिमेन्टको स्केलि requires आवश्यक छ - लोगो, छवि, प्रतिलिपि आदि। - तदनुसार। यसले बिलबोर्डको स्थान, यसको सामग्री, र अन्य धेरै कारकहरूलाई "वास्तविक" डिजाइन प्रक्रिया सुचारू गर्न कडाईका साथ कुचुल्काइ समावेश गर्दछ।
दिमाग उठाएर, भारी आधारभूत काम नगरी, बिलबोर्डले यसको प्राथमिक उद्देश्य - बिल्डिंग ब्रान्ड मान्यता निर्माण गर्न अत्यन्तै असम्भव छ।
यस लेखमा, हामी तपाईंलाई त्यहाँ सबै कुरा बताउन जाँदैछौं कि बिलबोर्ड डिजाईन गर्नका लागि विचार गर्नु पर्छ जुन धेरै संख्यामा सीसा उत्पन्न गर्दछ र तपाईंको कडा परिश्रमलाई फलदायी बनाउँदछ।
बिलबोर्ड डिजाईनिंग: विचार गर्नुपर्ने कारकहरू
रंग र ग्राफिक्स
अधिकांश व्यक्तिहरूले यो गलत धारणा राख्छ कि बिलबोर्ड एक महँगो लगानी हो - लाभदायक रिटर्नको कम सम्भावनाको साथ।
तपाईं जान्न चकित हुनुहुनेछ कि डिजिटल विज्ञापनको बढ्दो लोकप्रियताको बाबजूद, होर्डिंगहरू अझै बाँकी छन्, आजसम्म पनि एक सबैभन्दा प्रभावकारी र किफायती बजार उपकरणहरू मध्ये एक हो।
बाहिरी विज्ञापनमा खर्च भएका 3.7..62 अरब पाउन्डमध्ये, करीव %२% होर्डिंगमा जिम्मेवार छ। एउटा अध्ययनले पत्ता लगाए कि% 48% बिलबोर्डहरू चालकको दृश्य रेखामा पढिएका छन्।
व्यवसाय मालिकहरूले कहिलेकाँही उनीहरूको महत्वलाई वेवास्ता गर्छन्। तिनीहरू सोच्छन् कि तिनीहरूले एक भाग्य लागत। यद्यपि हाम्रो खोजले उनीहरूको पक्षमा गलतफहमी हुने सल्लाह दिन्छ।
परम्परागत बिलबोर्ड वा कागज बिलबोर्डहरू, डिजिटल बाहेक, अन्य ब्रान्डहरूसँग स्लटहरू साझेदारी गर्नुपर्दैन र तपाईंको व्यापारलाई धेरै महीनाको लागि निहित बनाउँदछ।
डिजिटल बिलबोर्ड ऊर्जा कुशल छैनन्। तिनीहरू पावर अप राख्न धेरै ऊर्जाको आवश्यक पर्दछ। अर्कोतर्फ, कागज सजीलो रिसाइकल गर्न सकिन्छ। र त्यहाँ तपाईको ब्रान्डको सामाजिक सचेत छवि चित्रण गर्ने प्रश्न पनि छ।
बिलबोर्ड विज्ञापनको लागतलाई असर गर्ने केहि कारकहरू तल सूचीकृत छन्।
स्थान: शहरको व्यस्त क्षेत्रहरू, जसमा राजमार्गहरू र व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा लागतहरू अधिक छन्।
आकार: ठूलो बिलबोर्ड, महँगो यो हुनेछ। यो अधिक जग्गा कब्जा गर्नेछ भन्ने तथ्यका कारण।
प्रकाश: यदि तपाईं आफ्नो बिलबोर्ड रातभरि ठीकै राख्नको लागि रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले थप थाल्नु पर्छ।
दृश्यता: तपाईको हस्ताक्षरको लागि जग्गा किनेको दृश्यात्मक, स्पष्टमा पनि तपाईलाई अधिक लागत लाग्नेछ।
प्रतिस्पर्धा: वरपर धेरै बिलबोर्डहरू सहितको इलाकामा केहि थोरै क्षेत्र मात्र हुनेछ
तपाईंको बिलबोर्डको दृश्यता सबै भन्दा बढी प्राथमिकता लिन्छ। तपाईं यो देखिएको चाहानुहुन्छ - प्रमुख बन्नको लागि। यदि यो लजालु छ वा लुकाइएको छ, यो बिक्री को उत्पादन को आफ्नो क्षमता को लागी असर गर्छ।
यहाँ दृश्यता आकलन गर्दा कारक हुन केहि चीजहरू छन्।
ड्राइभरहरू यसलाई अविश्वसनीय रूपमा वेगको वेगबाट प्यासि are गर्दै छन्। तिनिहरु संग शायद केहि सेकेन्ड हुन्छ तपाईको बिलबोर्ड याद गर्न। यदि यो खराब पigned्क्तिबद्ध गरिएको छ, केवल परिधीय दर्शनको माध्यमबाट मात्र देखिन्छ वा सीधा पियरि not नगरेको खण्डमा, ध्यान आकर्षण गर्न गम्भीर रूपमा असफल हुने छ।
निश्चित गर्नुहोस्, जुनसुकै मूल्यमा यो प्रत्यक्ष अवलोकनकर्ता तर्फ अगाडि बढिरहेको छ र खुल्ला प्रहार ट्राफिकमा स्पष्ट छ।
सही उचाइ पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एउटा गगनचुम्बी भवनमा तपाईंको बिलबोर्ड रोप्नु भनेको केवल ईगलहरू र गिद्धहरू र मनपर्दोहरूलाई आकर्षित गर्न जाँदैछ। निश्चित गर्नुहोस् कि यो उचाईमा छ र अधिकतम पठनीयता लाई बढावा दिन्छ। १. 1-3 मिटरको अधिकतम प्रभाव उचाइ प्रायः जसो सल्लाह दिइन्छ।
एउटा अर्को कुरा जसले तपाईंको बिलबोर्डको मद्दत गर्दछ नष्ट गर्न हो। तपाईंको कलाकृतिलाई रोक्ने झुण्डिएको झाडी वा एउटा हस्तक्षेप पुल विपत्तीको लागि एक विधि हो।
निश्चित गर्नुहोस् कि कुनै पनि भवनहरू, रूखहरू वा झाडिहरू बाटोमा आउँदैनन्।
यो एक ब्रेनर हो। ट्राफिकको स्पष्ट विचार पाउन तपाईंको बिलबोर्ड मनोरन्जन गर्न जाँदैछ, ट्राफिक विभागमा जानुहोस् र कुनै न कुनै ट्राफिक काउन्टर प्राप्त गर्न अन्तरक्रियात्मक नक्शा र ट्राफिक प्रोफाइलहरू अध्ययन गर्नुहोस्।
तपाईंको लक्षित दर्शकहरूको गहिरो समझ हुनु प्रत्येक विपणन रणनीतिको पहिलो चरण हो।
यो उनीहरूको आवश्यकता र उनीहरूको इन्द्रियलाई लोभ्याउने भाषा जान्ने बारेमा हो।
को हुन तिनीहरु? के तिनीहरू हजारौं मानिस वा रूढीवादी पुजारीहरू हुन्? तिनीहरूको उमेर, तिनीहरूको लि What's्ग के हो? उनीहरू विवाहित छन् कि जटिल सम्बन्धमा? कुनै पनि चीज र सबै चीज तपाईको ब्रान्डको सन्देशलाई अन्तिम डिजाइनमा परिष्कृत गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ - र स्थान अन्तिममा पनि।
मानौं तपाईं एक फुटबल स्टोर को गर्व मालिक हो। फुटबल मैदान र अन्य खेल मैदानको नजिक बिलबोर्ड रोपण गर्नु सधैं पुरानो घरहरू भन्दा बढि अर्थपूर्ण हुनेछ।
बिलबोर्डको आकारले केही चुनौतीहरू खडा गर्न सक्छ। तर जब तपाइँ यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ: कसरी बिलबोर्ड डिजाईन गर्ने कार्य डिजाईन भन्दा फरक छ, मानौं मानौं, एक व्यवसायिक कार्ड? मेरो मतलब, यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ भने कसरी एक आश्चर्यजनक व्यापार कार्ड डिजाइन गर्ने, तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको चीज अप गर्ने र बिलबोर्डका लागि तपाईको डिजाईन रणनीति नक्कल गर्नु नै हो त?
आकारको बारे बिर्सनुहोस्। यो दोस्रो महत्वको हो। अर्को तर्फ, स्केल तपाईको प्राथमिक चिन्ताको विषय हुनुपर्दछ। टाढा स्थानबाट पनि अधिक प्रभावको लागि तपाईको बिलबोर्ड दृश्यमान हुनुपर्दछ। मापनको लागि लेखांकन गर्दा यो दिमागमा राख्नुहोस्।
Col. र and्ग र ग्राफिक्स
रंग र ग्राफिक्सको साथ विशाल जान संकोच नगर्नुहोस्। साहसी, प्रख्यात र उल्लेखनीय दृश्य हुनुहोस्। र Color्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसले डिजाइन बनाउन वा भ or्ग गर्न सक्दछ। यहाँ छनौट गर्नुपर्दा तपाईंले विचार गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ।
जहाँसम्म छविहरू जान्छन्, एउटा पर्याप्त छ। धेरै धेरै छविहरू ड्रोम गर्ने र तपाईंको कम्पनीको सन्देशबाट दर्शकहरूलाई विचलित गर्ने छ। तपाईं त्यो चाहनुहुन्न।
छवि र र of्गको चयन पनि स्थान मा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईको बिलबोर्ड हराभरा हरियो क्षेत्रहरु को एक गुच्छा बीचमा राखिएको छ, तब आफैलाई सोध्नुहोस्, कुन र colorको दृश्यहरु लाई बढावा दिनको हरियो संग तुलना गर्नु पर्छ?
तपाईंको बिलबोर्ड शारीरिक परिवेश अनुसार रंग र ग्राफिक्सको छनोटको बारेमा सोच्नुहोस्। र निलो पृष्ठभूमि को लागी कहिले पनि अप्ट नगर्नुहोस्। यो नीलो आकाश संग मिश्रण गर्न को लागी बाध्य छ र प्रतिलिपिलाई पूर्ण अपुरो बनाउँदछ।
कन्ट्रास्ट बिलबोर्डहरूको एक महत्त्वपूर्ण घटक हो। पेयरि h ह्युज र लिम्पिड र जीवन्त र between्ग बीचको भिन्नता छनौट गर्न सिफारिस गरिन्छ।
याद राख्नुहोस्: डिजाइनहरूका लागि र colors्गहरूको पूर्व निर्धारित संयोजन छैन; तपाईंले टिन्कर गर्नुपर्नेछ र कुन विरोधाभास प्रदान गर्दछ सबै भन्दा राम्रो दृश्यता र उपस्थिति प्रदान गर्दछ।
केही लोकप्रिय विरोधाभासहरू तल सूचीबद्ध गरिएको छ।
मानक जेट-कालो र सेतो
गाढा पहेंलो र सुस्त कालो
गाढा हरियो र सेतो
रातो-रातो र सेतो
जीवन्त, लुस्रोस र चम्किलो र withहरूसँग टाँसिनुहोस्। कहिल्यै सुस्त, ब्ल्याण्ड र मुड-मार्ने ग्रे र कालोहरू कहिल्यै नखानुहोस्। उच्च-कन्ट्रास्ट र reallyहरू जुन वास्तवमै पृष्ठभूमिसँग मिल्दोजुल्दो देखाउँदछ जुन तपाईंको ब्रान्डलाई अधिकतम एक्सपोजरको सन्देश दिनेछ।
सरलता र टाइपोग्राफी हात पट्टि हात लाग्छ। एक ठाडो, सुवाच्य, गैर इटालिसाइज टाइपफेस सल्लाह दिइन्छ। एक सेन्स सेरिफ वा टाइम्स न्यू रोमन वा उहि लाइनहरूमा केहि केहि गर्दछ।
र फन्ट साइज ह्युमंगस राख्नुहोस्। दृश्यता को मामला मा सोच्नुहोस्। भूमिबाट उचाई र तपाईंको श्रोताको दूरीबाट वृद्धिसँग फन्ट आकार बढाउनुहोस्।
अब शब्दहरूको संख्यामा। फेरि, बृभिटी तपाईंको सबैभन्दा मिल्ने साथी हो। सब भन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली ट्यागलाइन वा ब्रान्ड सन्देश १ 15 शब्द भन्दा लामो छैनन्। औंठिको नियमको रूपमा, पाठको एकल लाइनमा words भन्दा बढी शब्दहरू एकीकृत नगर्नुहोस्।
शब्दहरूको लम्बाईले पनि महत्व राख्छ। यदि तिनीहरू अत्यधिक लामो छन् भने, तपाईंले तिनीहरूको गणना कम गर्नुपर्नेछ। केवल यकिन गर्नुहोस् कि त्यहाँ उनीहरूका बीच पर्याप्त खाली ठाउँ छ, र ती विवश देखिँदैनन्।
तपाइँ निश्चित कुञ्जी शव्दहरूलाई थप महत्त्व दिनको लागि यसलाई जोड दिन वा यसलाई इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ। होशियार रहनुहोस्: इटालिक शब्दहरूले टाढाबाट गडबडी निम्त्याउन सक्छ; तिनीहरूको अधिक प्रयोगबाट स्पष्ट राख्नुहोस्।
याद राख्नुहोस्: तपाईको उद्देश्य पृष्ठभूमि र छविहरु र प्रतिलिपि बिच भिन्नता मात्र सिर्जना गर्नु हो, तर वरपरको वातावरण पनि हो।
मध्यम प्रमुख डिजाइन विकल्प ड्राइभ। के तपाइँको बिलबोर्ड एक विनाइल ब्यानरमा मुद्रित भइरहेको छ वा मुद्रित वा नालीदार प्लास्टिक?
स्थानमा निर्भर गर्दै, सामग्रीको छनौट पनि फरक हुनेछ। केहि सामग्रीहरू बाहिरी डाकमा बढी उपयुक्त हुन्छन् जबकि केहि घरका लागि।
बिलबोर्ड डिजाइनिंगको कठिन इलाकामा हिंड्नु अघि, प्रिन्ट सामग्रीको बारेमा पूर्ण स्पष्ट हुनुहोस्। साथै, एक प्रिन्टर भेट्टाउनुहोस् जसमा अत्याधुनिक उपकरणहरू छन् र एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्न तपाईंको डिजाइन सबै सफा र चम्किलो बाहिर आयो
मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यी महत्त्वपूर्ण विवरणहरू पत्ता लगाउनु अघि तपाईं संघर्षको संसारबाट बचाउनुहुनेछ।
तपाईं प्रत्येक उपरोक्त नियम पालन गर्न सक्नुहुन्छ। सहि रंगहरू, उत्तम कन्ट्रास्ट छनौट गर्नुहोस्, तर यदि तपाइँको बिलबोर्ड क्लोन, एक बोरिंग गडबड, क्लिचिé डिजाइनर पुस्तक बाहिर केहि हो, के यो कहिल्यै बाहिर उभिन गइरहेको छ? पक्कै पनि होइन!
तपाईंले बाकस बाहिर सोच्न हिम्मत गर्नुपर्दछ। माथिको सूचकहरू तपाईंको फाउण्डेशनको रूपमा प्रयोग गरेर, एक मौलिक र दृश्य उत्तेजक मास्टरपिस शिल्प गर्नुहोस्।
मलाई गलत नबनाउनुहोस्: म केहि जटिल बनाउन सुझाव गर्दै छैन। बिलबोर्डहरूको मामलामा, तपाइँसँग तपाइँको दर्शकहरूलाई मोहित गर्न केहि सेकेन्ड मात्र छ। यदि उनीहरूले तपाईंको बिलबोर्डको पोइन्ट प्राप्त गर्दैन भने, तपाईंको ब्रान्डको सन्देश सीमित समयसीमामा, के पोइन्ट हुन्छ?
तपाईंले सरल केहि सरल शिल्प गर्न पर्छ। एउटा आकर्षक ट्यागलाइन, एक विचित्र छवि, केहि चीज जुन बाहिर हाँस्न वा जिज्ञासा जगाउँदछ - कुनै पनि हिसाबले एक संकुचित वा चोरी विचार होईन।
मूल सोच मात्र बिलहरू तिर्दैन; यो तपाईं एक करोडपति बनाउँछ।
मूर्ख बिलकहरू तपाईंको बिलबोर्ड डिजाइनमा बेवास्ता गर्न
अब हामी सबै चीजमा फैक्टर बनाएका छौं, अब अधिक डिजाइनरहरूले बनाउने केहि हास्यास्पद र भयful्कर गल्तीहरूको बारेमा केही प्रकाश दिन्छौं, थप तपाईंलाई सही दिशामा धकेल्न।
एक महान डिजाइनर आफ्ना विचारहरु कसरी परिष्कृत गर्न जान्दछन्। अधिकांश डिजाइनरहरूको अन्तिम डिजाइनमा छवि र ग्राफिक्सको अधिक सामान पुर्‍याउन यो खुजली हुन्छ। ठेगाना! सामाजिक मिडिया र वेबसाइट लिंक! र अन्य भगवान भयानक र असाधारण जानकारी। नरक, केहि आफ्नो व्यवसाय को चित्रहरु पनि सामेल छन्।
तपाईको डिजाईन बढि भीड हुनुको सब भन्दा ठूलो कारण भ्रम हो। धेरै धेरै पाठ र अन्य डिजाइन तत्त्वहरूले दर्शकहरूलाई उनीहरूको टाउको खरोंचमा पार्दछ। तिनीहरू डराउँछन् र अलमल्लमा पर्छन्।
यस गलत मार्गमा हिंड्नुको सट्टा, एउटा केन्द्र बिन्दुमा काम गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो दर्शकलाई सम्झन चाहनुहुन्छ। के यो तपाईंको लोगो हो? के यो हाम्रो कम्पनीको आदर्श हो? वा पूरै अरू केहि? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको हस्ताक्षरको कक्षा यसको वरिपरि घुम्दछ र यसलाई प्रमुख बनाउँदछ।
तपाईले सबै ठीक गर्नुभयो। हरेक राम्रो विवरण राखिएको। तपाईंको बिलबोर्ड त्यहाँ छ र यसको छाप बनाउनको लागि तयार छ। र त्यसपछि यो सबै पछि, तपाईंले एउटा स्पष्ट व्याकरण व्याकरण वा गलत हिज्जे याद गर्नुभयो। र त्यसपछि यो तपाईं मा dawns कि यस्तो सानो लापरवाही तपाईंको शौचालय तल मेहनत फ्लश छ।
जे होस् ग्राहकहरु तपाइँको विज्ञापन बाध्यकारी र दृश्यात्मक riveting पाउन को लागी, त्यस्ता typos ले तपाइँ लाई अव्यावसायिक, unkemitted र बिल्कुल लापरवाह देखा पर्न सक्छ।
यो किन एक पेशेवर कम्पनी भर्ती को कारण छ Print Peppermint कुनै पनि अनियन्त्रित अप्ठ्यारोबाट मुक्त हुन अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ।
छविबाट टाईपोग्राफीमा सबै कुरा, एक अर्काको पूरक हुन सेवा पुर्‍याउनु पर्छ। अन्यथा, तपाइँ तपाइँको ब्रान्डको अव्यवस्थित र विकृत छवि चित्रणको जोखिम चलाउनुहुन्छ।
डिजाईनको एकरूपता हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो। यदि तपाईं निश्चित रूपमा यसलाई हटाउन सक्नुहुन्न भने, एक पेशेवर डिजाइन कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् तपाईंको व्यापारको सन्देश सुसंगत र केन्द्रित छ भन्ने सुनिश्चित गर्न।
एउटा अर्को डिजाइन गल्ती जुन अक्सर क्र्याकहरूबाट स्लिप हुन्छ गलत स्केलिंग हो। के छविहरू र ग्राफिक्स अस्पष्ट वा पिक्सलेटेड छन्? उत्तम स्केलेबिलिटीलाई उच्च गुणवत्ताको भेक्टर वा HD फोटो आवश्यक पर्दछ।
कार्यमा कल छुटेको छ
प्रत्येक विज्ञापन एक प्रभावी कल-टु-एक्शन बिना अपूर्ण छ।
ब्यापार साइनेजको मामलामा तपाईंलाई कुन लक्षित प्रोम्प्ट चाहिन्छ तपाईंको लक्षित ग्राहकहरू लिन? के तपाईं तिनीहरूलाई कल गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईंलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्?
अवश्य पनि, प्राय जसो बिलबोर्डहरू केवल ब्रान्ड एक्सपोजरको लागि डिजाइन गरिएको हो। तर कहिलेकाँही एक ढु birds्गाले दुई चराहरूलाई मार्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
कहिलेकाँही बाहिरी विज्ञापनहरू लाभांश भुक्तान गर्न असफल हुन्छन्। यसले जटिल निराशा निम्त्याउँछ, जसले फलस्वरूप गलत निर्णयहरू लिन्छ र समय र लगानी डुब्छ।
तपाईंको हस्ताक्षरलाई ग्राहकहरूमा लोभ गर्न समय दिनुहोस्। आफ्नो क्षमतामा शंका नगर्नुहोस्। तपाईंले काम, सोच, योजना बनाउन घण्टा बिताउनुभएको छ। तपाईंले आफ्नो कडा मेहनतलाई केहि समय दिन आवश्यक छ।
बिलबोर्डहरू अन्य साइन विज्ञापनहरू विपरित हुँदैनन्। यो केवल तिनीहरूको प्लेसमेन्ट हो जसले तिनीहरूलाई विशेष ध्यानको योग्य बनाउँछ। मापन देखि टाइपोग्राफी, तपाईं हरेक पक्ष पूरा गर्न को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी तिनीहरू उभिनु पर्छ र एक कथन योग्य छ एक कडा परिश्रम को योग्य छ। तपाईं हाम्रो बाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ बिलबोर्ड डिजाइन सेवाहरू र हाम्रा विशेषज्ञ डिजाइनरहरूले उत्कृष्ट बिलबोर्ड डिजाइन गर्न सम्पूर्ण प्रक्रियाको लागि तपाईंलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछन्।
यस विशाल डिजाइन परियोजना डिजाइन गर्नु अघि विचार गर्नुपर्ने कारकहरू फरक हुन सक्दछन्, तर डिजाइन रणनीति धेरै शिफ्ट हुन सक्ने छैन। लक्षित श्रोताको मूल्यांकन, डिजाइन तत्त्वहरूको छनोट र अन्य आधारभूत कार्यका लागि अन्य पुरानो “ईंटवर्क” आवश्यक पर्दछ जुन अन्य मार्केटिंग परियोजनाहरूमा आवश्यक हुन्छ।
I म नि: शुल्क लोगोको डिजाइन कसरी गर्न सक्छु?
म कसरी बिलबोर्ड डिजाइन गर्ने? →